मार्च 5, 2019 मार्च 5, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment अँडिरको तेल, डा. राम बहादुर बोहरा
अँडिरको तेल (Caster Oil) र यसको प्रयोग । के पात कम्मरमा बाध्नाले महिलाको महिनारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने समस्या हल होला त ? हुन्छ तर यो कुनपात हो जसले यस्तो चमत्कारयुक्त काम गर्न सक्छ । आजकल यस्ता चिजमा मानिसले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् भन्दा खासै फरक पर्दैन । आयुर्बेदिक कम्पनीले यसको तेल बनाएर बजारमा ल्याएको छ । यो तेल गन्ध रहित हुन्छ । यो तेलको प्रयोले अनेक रोग निको बनाउन सफल छ ।
हाम्रो गाउँघरमा पहिले बारीमा उम्रने एक प्रकारको सानो रूख जसलाई हामी अँडिर भन्दछौं । आजकाल यो पनि लोप हुदैछ । यस्ता अनेकौं जडिबुटी लोप हुदैछन् यसतर्फ सवैको ध्यान जान आवश्यक छ । यसको पात र फल जरा सवै काममा आउछ ।
सर्पगन्धा र यसको प्रयोग
फलको भित्रको दाना निकाले र मासिक धर्म भएको पाचौं दिनमा १ दाना खाएमा एक महिना गर्भ रहदैन भनेको छ तर हामीले प्रयोग गरेर हेरेका छैनौं यसमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । यसको पात ल्याएर तल्लो पेटमा राखेर पटुका बाध्नु चमत्कार देखाउछ । महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने दिदी बैनीले अवश्य प्रयोग गरेर लाभ उठाउन म आग्रह गर्दछु । यसको अन्य प्रयोगबारे यहाँ प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु ।
यो औषधिको नाम हिन्दिमा अरंडी र इङ्लिसमा कास्टर आयल नामले बोलाउने गरेको पाइन्छ । नेपालीमा यसको नाम अँडिर भन्ने गरिन्छ । यो औषधि बहुउपयोगी छ लोप हुनबाट बचाउ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
१. छाला सम्बन्धित रोगमा
अँडिरको जरालाई २० ग्राम जति कुट्नु होस ४०० मिली जति पानीमा पकाउनुहोस् र १००मिली बाँकी रहेपछि पिउन दिने यो ठूलो मान्छेको डोज हो । यसको प्रयोगले छाला सम्बन्धित रोग निको हुन्छ ।
२. कपाल उमार्न
कास्टर आयल अँडिरको तेल बच्चा होस या बुढो सवैलाई टाउकोमा मालिस गर्नाले कपाल उम्रन थाल्दछ ।
३. यसको तेलको प्रयोग
पेट साफ राख्न उपयोगी छ । दुधसंग दिनाले पेट साफ राख्न राम्रो काम गर्दछ ।
४. पेटका जुका चुर्ना मार्न
साना ठूला बच्चाहरुको पेटमा जुका परेकोमा अँडिरको तेल खान दिनुको साथै यस्को पात थिचेर चाकमा रस लगाउनाले चुर्ना जुका मार्दछ ।
← शिव पुराण अनुसार १२ कर्महरु जसलाई संज्ञा दिइएको “महापाप”
दाँतको रोग र उपचार →
One thought on “अँडिरको तेल (Caster Oil) र यसको प्रयोग”